कुन्साङ एलिजाको जोडी हुन नमानेपछि हंगामा ! – Sandes Post
April 3, 2022 795
तामझामका घोषणा भएको थियो फिल्म ‘घुइँचो’ । नायिका घोषणा गरियो एलिजा गौतम अनि नायक कुन्साङ बोमजङ।
बोमजङ नायिका मलिका महतको जोडि बनेर म्युजिक भिडियो खेलेर चर्चामा आएका थिए। तामझामका साथ घोषणा गरेको कार्यक्रममा जब फिल्म निर्देशनको रूपमा दीपेन्द्र लामाको नाम आयो धेरै सञ्चारकर्मी छक्क परे। रङ्ग पत्रकारिता गर्दागर्दै फिल्म निर्देशनमा सक्रिय भएका उनी फिल्म निर्देशकमध्ये व्यवसायमा बढी नै सचेत देखिन्छन्।
यो फिल्ममा नायकभन्दा पनि अनुबन्धन भएकी नायिकालाई लामाले कसरी स्वीकार गरे भन्ने नै हो।
एलिजा लगानीसहित नायिका हुने कलाकारको रूपमा फिल्म नगरीमा चर्चित छिन्। उनले यस भन्दा अगाडि अभिनय गरेको फिल्म उनका श्रीमान् ऋषि धमलाले निर्माण गरेका थिए। घुइँचो घोषणा गर्दा नै कुन्साङ कति समय यो फिल्ममा टिक्छन् भन्ने शङ्का पनि थियो।
भयो पनि यस्तै। कुन्साङ यो फिल्मबाट बाहिर भइसकेका छन्। उनले आफू निकटहरूलाई फिल्ममा अभिनय नगर्ने बताइसकेका छन्। तर फिल्म निर्माण टोलीले यसबारे केही खुलाएको छैन। फागुनबाट फिल्म फ्लोरमा जाने बताइएको थियो। तर कुन्साङ ब्याक भएपछि फिल्म फ्लोरमा जान सकेन।
अहिले फिल्म टोली एलिजासँग जोडी बाँधिन तयार नायकको खोजीमा छन्। एलिजा भने अहिले म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्न व्यस्त छिन्। निर्देशक दीपेन्द्र फिल्म ‘२ नम्बरी’को छायाङ्कनतिर लागेका छन्। जे होस् यो बिषयले फिल्मी क्षेत्रमा हंगामा मच्चिएको छ ।
Prevपल शाहविरुद्ध ४ जनाले ‘फसाउने’ सल्लाह गरेको अडियोलाई अदालतले प्रमाण मान्छ ? यसो भन्छन् वकील
NextBreaking News: यस्तो सहमतीपछि पेट्रोलियम व्यवसायी भए ब्याक, आइतबारदेखि इन्धनको आपूर्ती सहज हुने (सहमतीपत्रसहित)
१७ वर्षको उमेरमा बिरामी आमा पाल्न यसरी लेबर काम गर्दै यी नानी (भिडियो हेर्नुस्)